Xogta Tahribka - The Migrant Project
Maalin kasta dadku waxa ay qorsheeystaan go’aanno adag oo ay kaga tagayaan dalalkooda hooyo ee Itoobiya iyo Soomaaliya iyaga oo raadinaya mustaqbal wanaagsan. Khatar badan ayaa naftooda ka soo gaadha iskudayga ay Yurub ku gaadhayaan.
Adigu ma ku fkiraysaa in aad tahriibto mise waa aad tahriibtay? Baro wax badan oo ku saabsan xuquuqdaada sharciga ah iyo halista tahriibka sharci darrada ah oo kaa caawinaysa go’aan qaadasho ka-war-qab leh.
Waxa jira sababo badan oo dadka ku qasba in ay qaataan go’aan adag oo ay kaga baxaan Soomaaliya. Tusaale ahaan, qaarka mid ahi w...
Ma tahay qof ku talo jira in uu Yurub ku tago si sharci darro ah ama ma garanaysaa qof sidaas raba. Si kale haddii loo dhigo, ma...
Sanad walba, kumanaan dad ah ayaa isku daya in ay u hijroodaan waddamo kale iyaga oo aan haysan dal-ku-gal sharci ah ama...
Soomaali badan oo tahriibayaal ah ayaa ka hayaama Geeska Afrika iyaga oo ku sii jeeda Yurub kuwaasi oo rajaynaya in ay dhistaan...
COVID-19 waxa uu halis ku yahay qof kasta laakiin tahriibayaasha ayaa ah kuwa ugu nugul. Ka hot tagga ayaa ah qaabka ugu wanaagan...